The Rohingya News Bank : 2022
လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဆီ ဦးတည်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ (Holocaust ပြခန်း)
၁၃ ဧပြီလ၊ ၂၀၂၂
ဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ Holocaust ပြတိုက်ကို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Antony Blinken ပြီးခဲ့တဲ့ လ က သွားရောက်တဲ့အချိန် မြန်မာနိုင်ငံက ရိုဟင်ဂျာမူဆလင်တွေအပေါ် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်မှုတွေဟာ Genocide လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု မြောက်တယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ကိုငြိမ်းချမ်း ပြောပြပါလိမ့်မယ်။
Labels: 2022, Holocaust ပြခန်း, mm, Video, ရိုဟင်ဂျာ, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု, သတင်း
ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာ အမေရိကန် အစိုးရ သဘောထား
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် ဖိနှိပ် ညှင်းပမ်း သတ်ဖြတ်မှုတွေဟာ လူမျိုးတုံးသတ် ဖြတ်မှု ကျူးလွန်ရာ ရောက်တယ်ဆိုပြီး အမေရိကန် အစိုးရက သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒီအကြောင်း အမေရိ ကန် အစိုးရရဲ့ သဘောထားအမြင် အာဘော်ကို တင်ပြပေးပါမယ်။
Labels: 2022, mm, Video, ရိုဟင်ဂျာ, လူမျဒိးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု, သတင်း
မြန်မာ့အရေး ဒေါ်လာ သန်း ၄၇ဝ ပေးဖို့ အမေရိကန်အောက် လွှတ်တော် သဘောတူ
၂ဝ၂၂ မြန်မာ အက်ဥပဒေ ‘‘Burma Unified through Rigorous Military Accountability Act of 2022’’ or the ‘‘BURMA Act of 2022’’ ကို ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့မှာ အမေရိကန်အောက် လွှတ် တော်က အတည်ပြုလိုက်တဲ့ အတွက် အထက်လွှတ်တော်ကလည်း ထပ်မံအတည်ပြုမယ်ဆိုရင် သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတာ နဲ့ အသက်ဝင်လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Labels: 2022, BURMA Act of 2022, mm, ၿမန္မာ့အေရးယ အေမရိကန္, သတင်း, အကူအညီ
ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ဘယ်သူတွေလဲ (၁)
ဗမာပြည်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို ပြန်ကြည့်ရင် ပဒေသရာဇ်ခေတ်၊ ကိုလိုနီခေတ်၊ လွတ်လပ်ပြီခေတ် စသဖြင့် ခေတ် တိုင်း ခေတ်တိုင်းမှာ ရှုပ်ထွေးတဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး၊ လူမျိုးရေး ပြဿနာတွေ ထုနဲ့ထည်ပါ။
အငြင်းပွားမှုတွေကလည်း အများအပြားရှိပါတယ်။ အဲ့လို ပြဿနာတွေ၊ ကိစ္စရပ်တွေ၊ အငြင်းအခုံတွေကြားမှာ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစုတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကတော့ လူစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးလို့ ပြောရပါမယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်လောက်ကစပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တကျော့ပြန်ဖြစ်လာတဲ့ ပဋိပက္ခတွေ၊ အတော်အသင့် စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ဆိုရှယ် မီဒီယာ (အထူးသဖြင့် facebook) အသုံးပြုသူတွေကြားထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ငြင်းကြခုံကြ၊ ဆဲကြဆိုကြနဲ့ပါ။
Labels: 2022, mm, ဆောင်းပါး, ရိုဟင်ဂျာ
ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ဘယ်သူတွေလဲ (၂)ရိုဟင်ဂျာတွေက တိုင်း ရင်းသားတွေ ဟုတ်ရဲ့လား
တူမီး တော်လှန်ရေးစာစဉ် အမှတ်စဥ် (၄၅)
ဧပြီလ(၅) ရက် ၂၀၂၂
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်တုန်းကတော့ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗမာပြည်က ပြည်သူလူထုတွေကြားထဲမှ အ ပြောများဆုံး ဇာတ်ကြောင်းတွေ အမုန်းစကားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီတပတ် ပြောပြမယ့် အ ကြောင်း အရာကတော့ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေးမြန်းခံရဆုံးမေးခွန်းအကြောင်းပါ။ ကျနော့် အနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစုတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာနဲ့ လူမျိုးစု ရေးရာ ကိစ္စတွေ၊ သူတို့ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်မှု ကိစ္စတွေကို ကာလတခု အချိန်ယူပြီး လေ့ လာဖြစ်ခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်မှာ စာတမ်းနဲ့ အစီရင်ခံစာတချို့ ရေးသားဖြစ်ခဲ့သလို၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေနဲ့ နိုင်ငံရေး ပါတီတချို့ကို ဟောပြောပို့ချတာ၊ သင်တန်းပေးတာ၊ ဆွေးနွေးတာတွေ လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လို လုပ်ခဲ့တဲ ကာလတလျှောက် အမေးခံရဆုံးမေးခွန်းကတော့ “ရိုဟင်ဂျာ တွေက တိုင်းရင်းသားတွေ ဟုတ်ရဲ့လား” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။
Today's News (Quick Search ) March, 2022
1,097 more Rohingyas reach Bhasan Char from Chattogram - New Age New Age
1999 more Rohingyas reach Bhasanchar - The Business Standard The Business Standard
Another 1,544 Rohingyas head for Bhasan Char - Dhaka Tribune Dhaka Tribune
Bangladesh to hang four over atheist blogger's murder - EasternEye Eastern Eye
Burma Army Burns Homes In Northern Chin State Burma News International
Cairo to Kyiv: Social media's rocky ride through conflict zones - Qantara.de Qantara.de
IOM Appeals for USD 128 Million to Support Rohingya Refugees and Local ... - ReliefWeb ReliefWeb
Muslim organizations lead COVID-19 educational outreach to immigrants and refugees in ... Wisconsin Muslim Journal
Myanmar's rebellion, divided, outgunned and outnumbered, fights on - The Washington Post The Washington Post
NGO files first intl. complaint against Myanmar junta in Turkey - La Prensa Latina Media La Prensa Latina
Nothing New About Myanmar Junta Chief's Cruelty - The Irrawaddy The Irrawaddy
Old bomb explodes in Buthidaung, Muslim man killed | Narinjara News Narinjara News
Over 100 Religious Buildings Destroyed by Burmese Military - Persecution.org Persecution.org
Private school closure adds to Rohingya woes | The Manila Times The Manila Times
Remembering Myanmar's Fallen Heroes - The Irrawaddy The Irrawaddy
Response plan launched to support 1.4 million Rohingya and Bangladeshis | Indiablooms Indiablooms
Sittwe evictees get temporary resettlement in Ponnagyun Twsp | Burma News International Burma News International
The Little Vladimir Vladimirovich Putin Of Burma – OpEd - Eurasia Review Eurasia Review
The United States Announces More Than $152 Million in Additional Humanitarian ... - USAID USAID
The United States intends to declare the Rohingya crackdown in Myanmar asa"genocide." Eminetra Canada
UNHCR and partners call for sustained global support for Rohingya refugees | Headlines Devdiscourse
US Humanitarian Assistance for Rohingya - STL.News STL.News
US, Singapore Leaders Urge Myanmar Junta to Free Political Detainees - The Irrawaddy The Irrawaddy
Labels: 2022, en, March, Quick Search, Today's News
နေ့စဉ် ရေဒီယိုသတင်း (အသံဖိုင် ) မတ်လ၊ ၂၀၂၂
အသံဖိုင်များကို " နံနက်ပိုင်း/ ညနေပိုင်း" တွင်ကလစ်နှိပ်၍ နားဆင် နိုင်ပါသည်။
Labels: 2022, Audio, mm, မတ္လ, အသံဖိုင္မ်ား
ယနေ့သတင်း (အမြန်ရှာရန်) 2022 မတ်လ
ယူကရိန်းကထွက်ပြေးရသူတွေအထဲ ကလေး ၂ သန်းကျော်ပါဝင် VOA
ကုလ ကိုယ်စားလှယ် Noeleen Heyzer မြန်မာ့အရေး ကမေ႓ာဒီးယားနဲ့ သွားရောက်ဆွေးနွေးမည် -VOA
အာရှ-ပစိဖိတ် မီဒီယာနှိပ်ကွပ်မှု ကန်လွှတ်တော်ကြားနာပွဲ မြန်မာကို အလေးထား-VOA
မြန်မာအပါအဝင် စစ်အာဏာသိမ်းမှုတွေကြောင့် ကမ႓ာ့ပဋိပက္ခတွေ ပိုများ (ကုလအတွွင်းရေးမှူးချုပ်) -VOA
မြန်မာစာနာမှုအကြပ်အတည်း စစ်ကောင်စီ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲ -VOA
နေရပ်ပြန် အမ်းမြို့နယ် စစ်ဘေးရှောင် တထောင်ကျော်ကို ငွေ ၅ သိန်းစီ နဲ့ ဆန် ထောက်ပံံ့-VOA
စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှု ရှာဖွေသူတို့ရဲ့ ရင်တွင်းဖြစ် ပန်းချီပြပွဲ -VOA
ကူးစက်မှုကျဆင်းပေမဲ့ သေဆုံးမှုတိုးလာတဲ့ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ -VOA
မြန်မာအခြေအနေ ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်ရေး ခြိမ်းခြောက်ဟု ကန်-စင်္ကာပူ ထုတ်ပြန် -VOA
ထိုင်း ရေငုပ်သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေး တရုတ် ရပ်ဆိုင်း -VOA
အမေရိကန် ဖိလစ်ပိုင် ပူးတွဲ စစ်ရေးလေ့ကျင့်-VOA
ခင်ဦးမှာ မတ်လ တစ်လထဲ အိမ်အလုံး ၄၀၀ ကျော်အထိမီးရှို့ခံရ-BBC
လူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံးပြုပြီး တရားမဝင်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ရောင်းချမှု ၇၄ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးလာ-BBC
စစ်ကိုင်းတိုင်းထဲက နေအိမ်မီးရှို့ခံထားရတဲ့ကျေးရွာတွေ ရိက္ခာလိုအပ်ချက်တွေအပြင် ရေအခက်အခဲ တွေပါ ရှိလာ-BBC
ကယားပြည်နယ်အတွင်း ရိက္ခာတင်သွင်းမှုအပြင် ဆေးဝါးတင်သွင်းမှုကိုပါစစ်ကောင်စီ ကန့်သတ်လာ-BBC
နေရပ်ပြန် အမ်းစစ်ရှောင်တွေရဲ့ အိမ်တွေပျက်နေ၊ ထောက်ပံ့ငွေနဲ့ မလုံလောက်ဘူးလို့ဆို-BBC
မြောက်ဦးဈေးနဲ့ ဆိုင်တွေကို ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှုရှိမရှိစစ်-BBC
သံတွဲမှာ ငှက်ပစ်သွားသူ ငါးဦး လက်နက်မှုနဲ့ အမှုဖွင့်ခံထားရ-BBC
ချင်းမိုင်မှာပြုလုပ်နေတဲ့ NCA-S EAO ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေညီလာခံကနေ နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံချမှတ်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်-BBC
စစ်ကောင်စီယာဉ်တန်းပေါ်ကနေ သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် ဒေသခံသုံးဦးဒဏ်ရာရ-BBC
မြဝတီ အာရှလမ်းသစ် တိုက်ပွဲကြောင့် နှစ်ဖက် ကားတန်း ရာချီ စောင့်ဆိုင်းနေရ-BBC
ကိုးကန့်ခေါင်းဆောင် ဦးဖုန်ကြားရှင် ဈာပနာအခမ်းအနား စစ်တိုင်းမှူးတက်-BBC
မြဝတီအာရှလမ်းကြီး တိုက်ပွဲ အရပ်သားသေဆုံးမှုတွေ ရှိ-BBC
စီးပွားရေးမြို့တော် ရှန်ဟိုင်းမြို့ကို လော့ခ်ဒေါင်းချ-BBC
ရိုမန်အေဘရာမိုဗစ်ချ် - မိဘမဲ့ဘဝကကနေ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ခံထားရတဲ့ သူဌေးကြီးဘဝ ခရီးလမ်း-BBC
ယူကရိန်းစစ်ပွဲ- ကိယက်ဗ်မှာ တိုက်ခိုက်မှု လျှော့တယ်ဆိုတာ တပ်တွေ ပြန်စုဖွဲ့နေတာတို့ ယူကရိန်းအကြံ ပေးပြော-BBC
၈၈ ငြိမ်း/ပွင့် တာဝန်ခံ ဦးထိန်မင်းခိုင်နဲ့ ဇနီးကို စစ်ကောင်စီ ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီး-RFA
စစ်ပွဲတွေကြောင့် ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ ရာချီ ပျက်စီးနေ-RFA
BIMSTEC အဖွဲ့မှာ မြန်မာပါဝင်မှုကို အိန္ဒိယ ကာကွယ်ပြောဆို-RFA
စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာ လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ များလာ-RFA
ချောင်းဦးသပိတ်ခေါင်းဆောင် ကိုမာန်ဇာမြေမွန် ထောင် ၂ နှစ် ချခံရ-RFA
သရက်ချောင်း ရွာတွေထဲ စစ်တပ်ဝင်လာလို့ ဒေသခံ ၅ဝဝဝ လောက် ထွက်ပြေးနေ-RFA
မီးရှို့ခံ နှမစားရစ်ရွာက ဒေသခံတွေ နေရပ်မပြန်နိုင်သေး-RFA
ရိုဟင်ဂျာတွေကို အမေရိကန်က ဆက်ကူညီဖို့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့တွေ တောင်းဆို-RFA
ဖားကန့်က အလွတ်သတင်းထောက် နှစ်ယောက် ထောင်တစ်နှစ်ခွဲစီ ချခံရ -RFA
ဘီးလင်းမြို့ ရန်ကုန်-မော်လမြိုင် ကားလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲ ကလေးငယ်နှစ်ဦး သေဆုံး -RFA
ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအတွက် အမေရိကန် ထောက်ပံ့ငွေ ထပ်ပေး -RFA
နှိမ်နင်းခွင့် ပိုရလာတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဥပဒေသစ် -RFA
လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင်တွေအကြား ညီညွတ်ရေးရဖို့ ဆွေးနွေး -RFA
ရခိုင်အတွက် ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ လက်နက်ကူညီခဲ့ကြောင်း AA စစ်ဦးစီးချုပ်ပြော -RFA
ဒဂုံတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား နှစ်ဦး ထောင် ၃ နှစ် အမိန့်ချခံရ -RFA
Labels: 2022, mm, မတ်လ, အၿမန္ရွာရန္., ေယန႔ သတင္း